स्थायी समिति बैठक अघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट किन ? - १६ असार २०७७, NepalTimes
स्थायी समिति बैठक अघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट किन ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको काठमाडौंमा जारी स्थायी समिति बैठक मंगलबार सुरु हुनुअघि पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटघाट गरेका छन् ।
नेकपाभित्र अन्तरविरोध चर्किरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठकको मंगलबारको बैठक सुरु हुनु ठीकअघि राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट वार्ता गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर फर्केपछि मंगलबारको स्थायी समितिको बैठक सुरु भएको थियो ।
सत्तारुढ दल नेकपाभित्र पछिल्ला दिनमा अन्तरविरोध चर्किरहेका वेला प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको एक विश्लेषकले बताए । यसअघि पनि पार्टीभित्र अन्तरविरोध चर्किएका वेला अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्दै आएका थिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय मुद्दामा नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच समन्वयकारी भूमिका खेलेको सार्वजनिक भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय विषयमा नेताद्वय ओली र दाहाललाई भेटेर कुरा गर्ने पनि गरेकी थिइन् । बालुवाटार स्रोतले भने यो नियमित भेट भएको बताएको छ ।